Niezaka ny Kubuntu 15.04 Beta2 aho ary mamela anao ny hevitro;) | Avy amin'ny Linux
Roa andro lasa izay dia nivoaka ny Beta 2 amin'ny ho ** Kubuntu 15.04 ** ary namela tsiro tena tsara tao am-bavako taorian'ny fizahana minitra vitsy. Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo zavatra mahaliana kokoa izay hitantsika amin'ity Beta ity.
1 Ny herin'ny KDE
2 Antsipiriany mahaliana hafa momba ny Kubuntu 15.04
3 Kubuntu 15.04 Fehiny
Ny herin'ny KDE
Angamba ny fanovana lehibe indrindra entin'ny ** Kubuntu 15.04 ** dia ny nametrahan'izy ireo ny filaminana sy ny fitoniana an'ny KDE 4.X hanokatra ny tanan'izy ireo amin'ny ** Plasma 5 **. Tsy tadidiko izay kinovan'ny Kubuntu izay niaraka tamin'ny KDE 4.0 voalohany, fa ny tsy hohadinoiko dia loza iray manontolo noho ny tsy fandriam-pahasalaman'ny birao tamin'izany.
Miaraka amin'ny ** Plasma 5 **, na dia mirona amin'ny zavatra mitovy foana aza isika, tsy mino aho fa hitovy amin'io fotoana io. Isika izay efa nizaha toetra ** Plasma 5 ** hatramin'ny nanombohany dia nahita ny fomba nitomboany tsikelikely ary ny pitsopitsony izay mbola tena tsy hita dia tena kely tokoa. Angamba ny tena mahasosotra indrindra dia ny rindranasa sasany, toa an'i Pidgin, tsy mampiseho ny kisary ao anaty fitoeram-bolan'ny rafitra. Saingy tsy isalasalana fa ny sasany amin'ireo tombony sy fanatsarana izay ** Plasma 5 ** dia hitondra antsika ao amin'ny ** Kubuntu 15.04 ** dia hahatonga antsika hanadino ireo zavatra ireo.
Hatramin'ny nahatongavanay teo amin'ny efijery * Login *, dia hitanay ny fikarakarana kanto izay nananan'ny mpamolavola KDE noho ny ekipa * ekipa * vaovao miandraikitra ny sary sy ny endrik'ity tontolo Desktop ity. Ny fisehoana mitovy hitantsika eo amin'ny efijery hidin-trano:
Rehefa miditra amin'ny Desktop dia heveriko fa ny zavatra voalohany ho hitantsika dia ny "minimalist" misy azy, ary tsy isalasalana fa tsara tarehy izy io, na dia ho an'ny tsiro loko aza. Ohatra iray amin'izany ny menio KDE Applications izay mahonon-tena, kanto ary tena * fisaka *.
Ary ho an'ireo izay tia lohahevitra maizina ao amin'ny Plasma, satria ny * Breeze * (lohahevitra vaovao ho an'ny Desktop), dia manome antsika kinova * Dark * ihany koa:
Antsipiriany iray hafa izay tiako ny * Live CD * an'ity Beta ity dia ny nampidirin'izy ireo ny fampiharana GTK ilaina, amin'ity tranga ity ** LibreOffice ** sy ** Mozilla Firefox **. Ankoatr'izay, ny endri-tsoratra default dia ** Oxygen Font **, endri-tsoratra natao manokana ho an'ny KDE, na dia tsy maharesy lahatra ahy amin'ny lalànan'ny rafitra * anti-aliasing * aza izany, ary miafara amin'ny fametahana iray hafa foana. Nanampy ny KDE Preferences Center ihany koa izy ireo, ny safidy hahita ny angon-drakitra ekipanay:
Miverina amin'ny ** Plasma 5 ** sy ny zava-baovao, dia misy applet * iray tafiditra ao anaty tontonana hifehezana ireo mpilalao audio:
Ary amin'ny tranga ** Kubuntu 15.04 **, * applet * iray hafa no nampiana hanombohana ny KDE Telepathy izay tena ilaina tokoa:
Etsy ankilany ao amin'ny ** Plasma 5 ** dia naka dingana mihemotra izy ireo (raha ny fahitako azy) amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo fampandrenesana mitsingevana amin'ny endrika miboiboika, izay tsy azo alamina mihitsy. Ireo raha vao nanjavona dia azo zahana amin'ny tontonana toy ny mahazatra.
Milaza aho fa dingana iray mankany aoriana satria miaraka amin'ny KDE4, azonao atao ny manala * ireo fampandrenesana avy amin'ny tontonana ary omena endrika mitovy (amin'ny bubble) izy ireo, saingy manana safidy isika hanao azy na tsia. Na izany na tsy izany, tena tsara ny endrik'izy ireo.
Antsipiriany mahaliana hafa momba ny Kubuntu 15.04
Fitsapana ny * LiveCD * Nahita antsipiriany hafa hitako fa mahaliana aho, toy ny ** Kubuntu dia misy lohahevitra GTK vaovao antsoina hoe Orion ** izay manana ny karazany ho an'ny fampiharana GTK2 sy GKT3. Ary koa, manampy fomba sary vaovao ho an'ny KDE antsoina hoe * Fusion *.
Ny zavatra iray hafa nahasarika ny saiko dia rehefa nanoratra tao amin'ny ** Kate ** aho, dia voatazona. Rehefa niverina aho dia nosokafako ** Kate ** nametra-pialana indray fa efa naka naoty be dia be aho nefa tsy nahangona, saingy hitako izao:
Tsy namela ahy hahita ny fiovana Taloha / Taorian'ny, fa namela ahy hitadidy izay nosoratako, na afaka nanadino azy aho. Inona ny hevitrao? Raha efa teo io taloha dia efa nisakafo maraina fotsiny aho 😉
Araka ny hitanao amin'ny pikantsary, anisan'ireo naoty notondroiko ho * zavatra ratsy amin'ity beta * ity, ny LibreOffice dia mila fitiavana bebe kokoa satria ny fampidirana miaraka amin'ny KDE dia tsy ratsy tanteraka, fa ao amin'ny menio tsy fantatsika hoe rahoviana isika mijanona amin'ny safidy sasany izahay.
Ary mba hamaranana ity ampahany ity dia mila manaiky antsipiriany vitsivitsy izay tokony hankasitrahana aho. Voalohany, na dia maro aza ny fizarana maro hafa nanova ny fipetraky ny fitaovana ho * / run / media / user / fitaovana / *, Kubuntu dia mitazona hatrany ny teboka * / media / mpampiasa / fitaovana / *. Ny teboka miampy iray dia ny fampidirana azy ao amin'ny KDE Connect hifandray amin'ny rafitray amin'ny alàlan'ny telefaona Android.
Kubuntu 15.04 Fehiny
Na eo aza ny fotoana fitsapana fohy, heveriko fa ** Kubuntu 15.04 ** dia vonona ary vonona handray ** Plasma 5 **. Aorian'ny KaOS, amin'izao fotoana izao Kubuntu 15.04 no mpizara * pro Plasma5 * hafa izay hatolotro ny namana rehetra. Amin'izao fotoana izao dia hiandry ny kinova farany hitsapana indray aho ary hanamafy raha marina ny hevitro.
Na izany na tsy izany, ny tsara indrindra azonao atao dia ny manandrana izany, ka avelako ho any amin'ny rohy ny rohy:
Sintomy ny Kubuntu 15.04 Beta 2
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Niezaka ny Kubuntu 15.04 Beta2 aho ary mamela anao ny hevitro;)
Obi-wan kenobi dia hoy izy:
Mahaliana. Ho hitantsika amin'ny volana aprily rehefa mivoaka ilay kinova miorina.
PS: 15.04 dia LTS? Noheveriko fa ny tsiroaroa, 14.04, 16.04, sns ...
Mamaly an'i Obi-Wan Kenobi
Tsy izaho malalako.
Ny tsiroaroa, fa amin'ny XX.04.
Miala tsiny. Diso fandikana ny ahy.
Fanitsiana kely raha tianao:
«Na eo aza ny fotoam-pitsapana fohy, mino aho fa vonona ny Kubuntu 15.04 ary handray Plasma 5. Amin'ny maha famotsorana LTS antsika dia tsy maintsy manana patina sy fanamafisana azo antoka na fanitsiana azo antoka isika, azo ampiasaina tanteraka. "
Raha ny fahalalako azy dia tsy mifanaraka amin'ny famotsorana LTS izany. LTS mivoaka isaky ny 2 taona, ny ankehitriny dia 14.04 LTS, ary ny manaraka dia mety ho 16.04 LTS. https://wiki.ubuntu.com/LTS
Ankehitriny, momba ny fitsapana: ny marina dia mahaliana ny distro, tiako ny fisehoana ankapobeny azony. Tsy maintsy andramantsika izany 🙂
Marina izany .. azoko ny hevitra fa ny .04 rehetra dia LTS: D. Misaotra tamin'ny fanitsiana, manamboatra azy aho izao.
Te hanandrana ny kinova farany aho, rehefa manandrana mitsapa an'ity beta ity amin'ny solosaina findainy aho raha mamindra ny varavarankely dia manomboka manjavona izy ireo na mikipy na manidy, manelingelina tokoa, manantena aho fa ny farany dia azo ampiasaina ho ahy, hanandrana amin'ny volana aprily aho .
Inona ny karatra horonan-tsary anananao?
Ny solosaina finday izay itsapako ireo fizarana dia manana AMD Radeon 7310 HD, amin'izao fotoana izao dia miaraka amin'i Antergos ary mihetsika tsara ny gnome amin'ny ankapobeny.
Izany no nitranga tamiko tamin'ny 14.10 sy ny plasma 5 ... Namaha izany aho tamin'ny alàlan'ny fampandehanana ny mpamily AMD. Izao tamin'ny 15.04 dia tsy nilaiko intsony.
Ho ahy manokana dia heveriko fa ity kinova ity, na dia mbola beta aza, no iray izay tena nahomby tamin'ny solosaina findainy ankehitriny (ary navaoziko tamin'ny 14.10). Haingam-pandeha, kanto, marin-toerana ... ny marina ... tena tiako izany. Izaho dia nanana olana roa ihany tamin'ny fampiharana izay nesorina ny antsasany, ary ny kmix izay hitranga raha tsy eo am-panombohana ny rafitra. Namboarina izany, tonga lafatra daholo! ary ny fanohanana amin'ny fiteny, no tena tsy haiko indrindra tamin'ny 14.10 alpha Plasma 5.
Yacolca dia hoy izy:
Salama .. ary ny fanontaniana an-tapitrisany dolara Ahoana no fomba hampandehako ny Compiz Fusion miasa?
Mamaly an'i Yacolca
Compiz Fusion amin'ny KDE? Tsy ilaina izany .. 😉
Tsy ilaina ve izany satria KWin? Tsy ilaina ve satria efa lany andro ny Compiz? Tsy ilaina ve izany satria tsy manampy amin'ny famokarana ny Compiz? ...
Fanontaniana misy finiavana tsara, azavaiko 🙂.
Tsara kokoa noho ny kwin's ny kioban'ny Compiz
Eny, tsy tiako ny Plasma 5, efa nanandrana izany aho tany Kaos, Manjaro, Kubuntu ary Arch ary tsy maharesy lahatra ahy izany. Toa ratsy ny loharanom-pahalalana, mandany ahy be lavitra noho ny amin'ny Kde4 izy io, tampoka imbetsaka, manomboka amin'ny sddm dia miadana toa an'i Kdm ary amin'ny ankapobeny dia toa Khel 4 endrika tarehy noho ny zavatra hafa rehetra izany. Raha milamina, azo itokisana ary azo antoka ny Kde 4, maninona raha manao facelift fotsiny miaraka amina sary masina vaovao, lohahevitra vaovao ary manatsara ny rindranasa izay tsy nikitika nandritra ny fotoana ela toa ny Amarok na Konqueror, sns?
Mamaly ny mangalatra
Plasma 5 mihoatra lavitra ny fanondrotana tarehy izany .. 😉
Manana izany olana izany ianao alohan'ny fanavaozana ny plasma farany 5.2.2, izay voavaha vao tsy ela akory izay, tsy mihidy intsony ary mandeha tsara. Tsy fanondrotana tarehy izany satria qt5, ny fihinanana ram dia mitovy amin'ny desktop desktop 4 manodidina ny 400 megabytes. Amarok? fa raha tsy misy ifandraisany amin'ny birao. o_O
Tonga lafatra fa voavahan'izy ireo izy ireo fa raha ny amiko dia hiandry mandra-pahavaratra hampiasako azy aho, raha ny hevitro dia mbola maitso be izy io, mampatsiahy ahy ny Gnome 3 rehefa nivoaka izy, feno bibikely.
Nolazaiko ny momba an'i Amarok satria ny fangatahana Kde sasany dia nilaozana efa ela, heveriko fa tokony ho napetraka aloha amin'ireo fampiharana ireo izy ireo fa tsy amin'ny birao.
Raha toa ka voakilasy be ny KDE 4 dia tsara raha atsahatra ny fampiasana azy, sa tsy izany? farafaharatsiny mandritra ny fotoana kelikely.
Mandra-pahoviana no anohanan'ny KDE 4?
Tsy dia ela aho no nampiasa KDE fa ny tena marina dia nomen'izy ireo fiakarana tsara tarehy izany amin'ny sehatra hatsarana. Raha ny fahitako azy dia nahazo isa marobe tamin'ity, somary nifarana daty.
Adolfo Rojas G dia hoy izy:
Hatramin'ny 2012 rehefa niova avy amin'ny Gnome sy / na ny derivatives (cinammon) ho Xfce aho dia mahatsiaro ho tena mahazo aina amin'ity tontolo farany ity (indrindra amin'ny kinova 4.12 vaovao izay efa nifanaraka tamin'ny zavatra antenaiko rehetra) saingy miresaka betsaka momba ny KDE izy ireo fa efa manome ahy sahala amin'ny Te hanandrana azy aho mba hanaisotra ny fahalianana ...
Valiny tamin'i Adolfo Rojas G
Ny hany zavatra manakana ahy tsy handeha amin'ny Linux dia ny olana momba ny bateria ao amin'ny Windows maharitra maharitra 3 ora ao amin'ny Linux manantena aho aorian'ny fanamboarana maro 1 ora sy sasany = /
Ugo Yak dia hoy izy:
Nahamarika fahombiazana tena tsara niaraka tamin'ny Ubuntu Gnome aho.
Mamaly an'i Ugo Yak
ups, kelikely tsy nahomby, ny "Ubuntu MATE" no tiako horesahina ^^ (mbola tsy nanandrana an'i Gnome aho).
Tokony apetrakao ny TLP hampihenana ny fanjifana…. Ampiasao ny PPA ary apetrakao ao anaty jiffy. Tsy mahagaga izany, saingy mahavita mampihena ny fanjifana eo anelanelan'ny 10 sy 20%.
Maharitra 6 ora ny bateriko.
Manatsara izany amin'ny fanarahana ireto dingana ireto:
Mahatsiaro tena fa tokony hiala amin'ny gnome aho ary mandeha any amin'ny kde, misy ny lisitry ny programa misy azy ao
Tsy raharahako fa ity no fampiharana ofisialy KDE 5 voalohany ao amin'ny kubuntu, fa tsy haiko raha mendrika ny hamela LTS izany. Hiandry ny famerenana voalohany aho ao anatin'ny 1 volana, nanandrana azy tamin'ny milina virtoaly aho ary mihinana ondrilahy betsaka kokoa amin'ny haavon'ny Gnome sahabo ho 600mb fa mandeha tsara.
OFFTOPIC: Misy mahalala ve ny mpilalao feo tsy maharikoriko toy ny amarok / clementine ao amin'ny KDE? Tiako ny deadbeef fa GTK…
Mpilalao mozika any misy iray tapitrisa. Raha tsy maintsy QT izany dia handeha ho any Tomahawk na YaRock aho. Manana ny lesoka izy ireo, saingy tena tsara.
Andramo i Cantata, tena feno ary mandany loharanom-pahalalana betsaka noho Amarok na Clementine.
migurl dia hoy izy:
ary inona no tokony hisy ny GTK?
Mamaly an'i migurl
Hiber dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara. Fanontaniana iray, inona no ho takiana amin'ny PC?
Mamaly an'i Hiber
Miovaova be izany, ny KDE dia afaka mihazakazaka tonga lafatra amin'ny Netbook misy RAM 1GB sy Atom amin'ny maha mpanodina azy. Ka miankina amin'ny hardware anananao io.
Ny interface KDE vaovao dia mandeha tsara miaraka amin'ny sary masina Nitrux (KDE) + TYPE [: ZERO]. Mampalahelo fa tsy afaka izy ireo.
Nanandrana kde aho ary toy ny amin'ny zavatra vitsivitsy amin'ny fiainana dia azoko antoka izany: tsy tiako ny KDE mihitsy. Pro-gnome aho
toa an'i kde, tsy tiako koa ny gnome. Pro-XFCE aho. Fa resaka tsiro io.
elav tiako manokana ny famolavolana ny Plasma 5. Na izany aza, noho ny olana fitoniana. Ny fijanonako ao amin'ny KDE 4 dia mandeha mandritra ny fotoana maharitra… Na farafaharatsiny mandra-pivoahan'ny kinova Plasma 5 azo antoka.
Amin'izao fotoana izao dia tena mahazo aina amin'ny KDE 4. Noho izany dia tsy maika ny manandrana Plasma 5 aho.
Na dia hanandrana azy aza. Mieritreritra aho fa hametraka kopian'ny Linux Mint vaovao miaraka amin'ny KDE amin'ny kapila mafy faharoa. Ka raha misy tsy mandeha amin'ny Plasma 5 dia very tsy misy aho 🙂
Mitovy ny eritreritro. Mieritreritra aho fa hifikitra amin'ny KDE4 mandritra ny fotoana fohy, saingy mbola afaka nanandrana Plasma5 tamin'ny PC hafa aho. 😉
Mpampiasa totozy aho, saingy nividy solosaina Intel i3 4gb mifangaro XNUMXgb, ahoana no hataon'ny KDE amin'ity masinina ity?
Misaotra anao mamaly 🙂
Toy ny landy namako
McKlain dia hoy izy:
Manana izany aho amin'ny Intel Core i5 ary mandeha tsara 🙂
Valiny tamin'i McKlain
Efa nanandrana azy tao amin'ny Fedora aho ary hitako mbola maitso maitso izy:
Tsy misy kisary birao ary tsy misy fomba hametrahana azy ireo (tsy misy boaty tsy fahita amin'izany) Tsy tsara izany raha te handresy ilay mpampiasa nentim-paharazana ianao.
Ny fampiharana fototra dia tsy hita ao amin'ny Qt5, toy ny Dolphin, konqueror, sns. Tsy tiako ny hybrid spawn izay afaka miforona eo anelanelan'ny kof 4 sy 5
Ny foibe fanaraha-maso KDE dia mbola tsy manana maodelim-panamafisana marobe. Tsy afaka manamboatra mpanonta, ohatra.
Ny fampiharana dia tsy azo hamaivanina amin'ny bara fampandrenesana.
Mbola tsy fahampiana lohahevitra maro, na dia io aza no kely indrindra amin'ireo olana.
Na izany na tsy izany, efa nihazakazaka ny KDE4 nentim-paharazana aho, ary raha tianao ny hametraka azy io dia manantena aho fa efa nahavaha ireo olana ireo aloha na farafaharatsiny avelao ny safidy hampiasa KDE4.
Ary izao no zavatra niainako manokana niaraka tamin'ny KDE5 tao amin'ny Fedora. Angamba any amin'ny distro hafa dia hafa izy, fa amin'ny ankabeazany dia tsy mino aho hoe diso lalana io.
Ny fahamarinana azo omena amin'ny fampivoarana rindrambaiko maimaimpoana. Na dia mikasika ny tontolon'ny sary…. Mety ho tiako ilay gnome sy kde mieritreritra bebe kokoa toy ny windows (raha azo atao izany). Izao 1 taona lasa izay mampiasa xfce4. Voalohany dia nofidiako izy io satria ny pc ampiasaiko isan'andro dia ambany loharanom-pahalalana, saingy avy eo dia notohizako nisafidy azy io satria io no paradigma birao miorina sy miorina indrindra, toy ny tamin'ny Windows XP. Mino aho, ary tsy avy amin'ny zavatra niainako manokana, fa ireo mpampiasa GNU / Linux (tsy izy rehetra, fa farafaharatsiny maro) dia tsy te-hitety isaky ny 2 taona raha toa ka asehon'ilay baraingo izay ilaintsika na ny bokotra izay eto rahampitso dia eo amboniny, na raha ny takelaka fanaraha-maso ankehitriny dia fomba iray ary rahampitso hafa. Plasma (kde 5) toa tsara tarehy, eny. Toa manintona izy io, eny. Saingy miaraka amin'ireo baolina feno isika fa noho ny «fivoarana an-tsary» izay tsy ilain'ny birao sy ny notebbok dia miova ny rehetra ary miova ary toa tsy miova sy mitombo.
Heveriko fa mahafinaritra ny fahazoana haingam-pandeha ireo fampiharana ary miasa tsara sy tsara kokoa ireo mpamily miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny boot sy ny kernel ary izany rehetra izany miaraka amin'ireo loharano mitovy amin'ny taloha. Fahagagana amin'ny rindrambaiko maimaimpoana izy ireo .. fa azafady !! aza manadala miaraka amin'ny tontolon'ny sary.
Mino aho fa miteny amin'ny anaran'ny maro. Miarahaba olona.
Dj vaky sambo dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara! Ny marina etsy ambony dia tsara be ilay izy. Ny tsy fahatokisako ny momba ny kinova farany an'ny fianakavian Ubuntu, dia noho ny fitakiana be loatra amin'ny fitaovana. Heveriko fa tsy hampiavaka azy mazava tsara ity ...
Mamaly an'i Dj Naufrago
Jamodev dia hoy izy:
Salama aho efa nandramako tamin'ity volana lasa ity ny distros marobe tena tiako ny Linux Mint 17.1 fotsiny fa misy zavatra ao amin'ny kanelina tsy dia tiako loatra ny nandehanako tany amin'ny Fedora 21 fa mbola misy zavatra tsy namela ahy ho faly, izao aho nanandrana ny kubuntu 15.04 ary faly aho fa Birao iray izay manana ny zava-drehetra, ny feso Estetika izay mitandrina tsara sy tsy manam-paharoa toa mahavariana ahy fa manana ny zavatra ilaiko rehetra aho, ny hany zavatra tsy nety tsara tamiko dia ny fampidirana amin'ny droopbox sy ao amin'ny kMenu izay milaza fa manorata mba hikarohana no nosoratako Terminal na konsole ary tsy misy mitady ny zavatra antenaiko fa manamboatra azy ireo izy ireo (tsy fantatro raha sendra olon-kafa izany), fa raha tsy izany dia mieritreritra aho fa eto aho dia mijanona KDE5 Gaga aho hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany
Mamaly an'i Jamodev
Tsy fantatro izay nataon'izy ireo fa kosa nanavao ny Arch fotsiny aho ary mandeha tsara, ny birao amin'ny ankapobeny dia mihetsika haingana, angamba misy lag (somary azo ekena), ankehitriny dia lasa tanteraka ny lag.
Asa tena tsara avy amin'ny ekipa KDE.
Nizaha toetra ny Kubuntu 15.04 andro vitsivitsy lasa izay aho ary tena tiako ilay izy, ekeko fa mbola tsy mpankafy ny KDE mihoatra ny zava-drehetra noho ny estetika, saingy tsy maintsy hazavaiko fa manana rindrambaiko tsara toy ny Dolphin, Okular, K3b mba hitonona anarana vitsivitsy ny KDE. Na dia mandany RAM betsaka lavitra noho ny Xubuntu aza izy, amin'ny PC taloha (AMD64x2 misy RAM 4gb sy karatra NVIDIA tafiditra) ity kinova ity dia mandeha tsara, asa tena tsara 🙂
Nanandrana fametrahana madio 15.04 aho, ary tsy mandray ny karatra sary Nvidia GS7300. mahamenatra ...
Continum4 dia hoy izy:
Niezaka ny Kubuntu 15.04, tena tsara ny KDE, saingy tsy afaka niasa tamin'io birao io, fianjerana be loatra. Tapitra nesoriko ilay izy, niverina tany amin'ny Kubuntu 14.10 aho.
toa windows 8 🙁
Raha ny momba ny sary, ny fahombiazana ary ny fanombohana dia mandeha tsara, ny hany zavatra hitako tsy fahombiazana dia ny fanamafisana ny feo isaky ny miditra ny rafitra aho ary tsy fantatro raha misy rakitra azo ovaina ka tsy mila manao an'izany aho isaky ny mandeha mamono na mamerina ny pc aho. Ny tavoaraiko dia misy 2.5Ghz dual core amd athlon processeur, RAM 4GB, karatra feo miampy ary karatra horonantsary 1Gb Ati.
Salama, te-haneho ny hevitro feno fanetren-tena aho, na dia miombon-kevitra betsaka amin'ny mpanoratra ny lahatsoratra aza aho, tsy mbola hanome soso-kevitra momba ny plasma 5 aho, mino tanteraka aho fa mila mamaha olana vitsivitsy izay mety ho vodin-tseranana ao anatiny. tontolon'ny birao.
Nahavita fitsapana vitsivitsy tao amin'ny Kubuntu 15.04 aho, napetraka tao amin'ny Laptop HP Brand, Model 420, miaraka amin'ny RAM 2GB ary hitako ireto manaraka ireto:
Hafainganana: Na dia voafetra aza ny fitsapana Laptop dia hitako fa miasa haingana be i Kubuntu mifandraika amin'ny rahalahiny Ubuntu 15.04 napetraka ao amin'ilay Solosaina iray ihany.
Volavola: Tsy isalasalana fa iray amin'ireo endrika kanto indrindra izay hitako farafaharatsiny, araka ny filazan'ny mpanoratra, hita fa tena niahiahy momba an'io teboka io ireo manam-pahaizana momba ny KDE, satria hita fa tena madio io. sy ny biraon'ny estetika.
Automation ofisialy: toy ny mahazatra LibreOffice, tsy misy azo lazaina na dia kely aza ny libreoffice hahafahana manoatra ny Biraon'i Microrobo, raha ny fahitako azy dia io no safidy tsara indrindra.
Mpitantana manokana: tsy misy na inona na inona holazaina hoe Contact Heveriko fa ny tsara indrindra amin'ny sehatra misy azy, ary tamim-pahamendrehana ity programa ity dia nanome ny tenany asa ilaina kokoa noho ny Outlook na Thunderbird mihitsy….
1.- Vola kely ny manamboatra azy io satria ny toerana misy anao dia misy ny lohahevitra Brize, saingy teboka io, na dia tsy zava-dehibe aza dia mety hahasosotra.
2.- Amarok, izaho manokana dia tsy tiako mihitsy satria hitako fa voafatotra be izy io raha toa ka hiaiky isika fa io no milamina indrindra ...
3.- ny rakitsoratra betsaka indrindra dia farafaharatsiny mba farafaharatsiny Kubuntu 15.04, manana olana goavana amin'ny sary, satria ny écran ny écran, mahita amin'ny bilaogy sasany dia aretin'andoha ho an'ireo olona Kubuntu izay tsy afaka namaha ity olana ity mety ho ny ombelahin-tongotr'i Achilles an'ny Plasma 5… toa nanao fanovana vitsivitsy ny Fedora 22 ary nahita vahaolana kely tamin'ity olana ity….
Raha fintinina dia heveriko fa ny Plasma 5 dia hanome zavatra betsaka horesahina, saingy afaka roa volana na farafaharatsiny rehefa mivoaka ny Kubuntu 16.04 (raha mivoaka izany), satria angamba amin'ny iray amin'ireo dia miala tanteraka avy any Ubuntu izy io. io daty io, iza no mahalala ...
Amin'ny farany dia manana safidy hafa maimaim-poana isika izay mamela antsika tsy hampiasa ny Robosoft 7 na Robosoft 10 amin'ny anjarako dia aleoko miandry mandra-pahatongan'ny Kubuntu amin'ny plasma 5 ...
Fanazavana: ny hevitro dia avy amin'ny olona manana 0 fahalalana momba ny siansa amin'ny solosaina, mpampiasa mahazatra sy mpihaza fotsiny aho….
Azoko lazaina fotsiny fa mitsoka i Windows !!!!
Miarahaba antsika rehetra !!!
julius mejia dia hoy izy:
Ary farany nisy olona nanao ny enti-modiny ary ampiako izy ireo fa manana olana amin'ny fahafantarana ny vokatra audio eo aloha izy ireo, ho antsika izay manana PC amin'ny birao ary mampiasa ny headset mifandray amin'ny jack eo aloha dia zava-dehibe izany, raha hamboarintsika amin'ny kmix ny Manaiky izy io fa very ny fikirana aorinan'ny famerenana amin'ny laoniny ny solosaina, matetika ny fiposahana eo amin'ny efijery ary mandreraka ary mitranga mihoatra ny zava-drehetra rehefa mijery sarimihetsika ianao na mihaino mozika misokatra am-baravarankely maro ary ny zavatra hafa dia nisy zavatra nitranga tamiko efa tamin'ny fotoana 2. Ary ilay mainty dia mainty tanteraka ary tahaka ny bira birao na mpitantana ny lahasa, saingy tsy mamela na mamela na inona na inona hanao izany izy, nihazakazaka namerina ilay KUBUNTU 14.10 mahery sy matanjaka taloha aho avy eo anaovako izao hevitra izao. Ny solosainako dia manana processeur AMD ATHLON 2.5 × 2 Ghz x64 4 Gb RAM DD 1Tb, sary Radeon 4550 1GB RAM
Valio i julio mejia
Toy ny efa nolazaiko hoe hafatra dimam-jato teo ho eo no niverina, hahaha, namboariko ilay olana mirehitra tamin'ny alàlan'ny fametrahana ny mpamily AMD miorim-paka ho an'ny karatra misy sary.
Eliud Gomez dia hoy izy:
Salama namana avy FromLinux: Nametraka Kubuntu 15.04 aho. Ny iray amin'ireo rindranasa Browser youtube SMplayer anao dia tsy mandeha amiko. Lazaiko aminao, ampahodiko ao amin'ny SMplayer ilay kiheba, ao amin'ilay safidy «karohy horonantsary amin'ny youtube, misy boaty fifampiresahana milaza hoe: Hadisoana: Tsy afaka mifandray amin'ny mpizara youtube. Azonao atao ve ny manampy ahy hamaha ity olana ity? Tena hankasitrahako izany. Manantena aho fa ny valin-teninao.
Valiny tamin'i Eliud Gómez